» रामचन्द्र पौडेल पक्राउ परेलगत्तै “ओलिलाइ” देउवाले रामचन्द्र पौडेललाइ किन गिरफ्तार गरेको? जे मन लागि त्यही गर्न पाइन्छ? भन्दै थर्काए! रामचन्द्र पौडेल पक्राउ परेलगत्तै “ओलिलाइ” देउवाले रामचन्द्र पौडेललाइ किन गिरफ्तार गरेको? जे मन लागि त्यही गर्न पाइन्छ? भन्दै थर्काए! – हाम्रो खबर
रामचन्द्र पौडेल पक्राउ परेलगत्तै “ओलिलाइ” देउवाले रामचन्द्र पौडेललाइ किन गिरफ्तार गरेको? जे मन लागि त्यही गर्न पाइन्छ? भन्दै थर्काए!
2020, December 2nd, Wednesday
admin 737 Views
काठमाडौं । तनहुँमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल प,क्राउ परेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले सिधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेका छन् । उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प,क्राउको विषयमा प्रश्न गर्दै ओलीलाई दिउसो फोन गरेका हुन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षाका कारण पौडेललाई पक्राउ गरिएको जवाफ दिएको बताइएको छ । बुधबार तनहुँमा एक पुल उद्घाटन गर्न जान लागेका पौडेललाई प्रहरीले नि,यन्त्रणमा लिएको थियो । पौडेलले पुल उद्घाटन गर्न लागेको भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि स्थानिय प्रशासनले पुल क्षेत्र आसपासमा निधेषाज्ञा जारी गरेको थियो । पौडेलले निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले प,क्राउ गरेको हो ।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुधबार दिउँसो टेलिफोन गरेको उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पुष्टि गरेका छन् । अवस्था विग्रन लागेकाले पौडेललाई प,क्राउ गरेको जवाफ ओलीले दिएको भानुले बताएका छन् ।
ओलीको जवाफमा प्रतिप्रश्न गर्दै देउवाले “शान्तिसुरक्षाको लागि भए उहाँ (पौडेल)लाई किन उहाँको घर नलगेको ? किन चौ,की लगेको ?” भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
तत्काल नेता पौडेलको रिहाइ गर्न पनि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाले भनेका छन् । बुधबार दिउँसो ब्यास नगरपालिकामा नवनिर्मित पूल उद्घाटनका लागि पौडेल गएका थिए । सो क्रममा सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकर्ताहरुले अवरोध प्रयास गरे पछि अवस्था विग्रन नदिन प्रशासनले बल प्रयोग गरेको जनाएको छ ।
तनहुँ जिल्ला ब्यास नगरपालिकाको वडा नं १ र ११ जोड्ने बुल्दी खोलामा नेपाली कांग्रेसकै पालामा निर्माण सम्पन्न भएको हुँदा कांग्रेस नेताले नै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । उपभोक्ता समितिले सर्वसम्मतरुपमा निर्णय गरेर पौडेललाई बोलाए पनि नेकपाका कार्यकर्ताले पौडेललाई पूल उद्घाटन गर्न दिन नहुने माग गर्दै विरोध जनाएका थिए ।